Mon - Sat na 7:00 AM ruo 6:00 AM
Industrial ahịhịa filament
PBT na PET mkpuchi
Ndewo, bia kpoo anyi!
Hot ire pa610 filament pro ...
Hot Sale naịlọn filament PA ...
Hot ire PA 66 ahịhịa filament
0.5mm uzo PA6 crimp ...
Naịlọn pa 610 filament eze ...
China rụpụta Industrial ahịhịa filament
Industrial filaments filaments nwere àgwà nke ogologo ọrụ ndụ, flawlessness, mfe imewe, elu arụmọrụ, enwekwukwa anwụ ngwa ngwa, mgbape eguzogide, na elu ekweghị ekwe.
Ogologo na PBT filament mara mma maka ezé ezé
The pbt ahịhịa filament nwere magburu onwe ike na mmetụta na-eguzogide, na n'ihi na nke ọma acid-eguzogide ma na obere mmiri absorption, ọ bụ adabara mmiri na-arụ ọrụ na gburugburu. A na-eji ya maka ịsachasị ezé, brushes ụlọ ọrụ na ihicha brushes, ntu ndị na-agba mbọ, wdg.
PA6 filament naịlọn bristle maka ulo oru ahịhịa ma ọ bụ ntutu ahịhịa
PA6 filament, ogologo kwụ ọtọ, ọdịdị mara mma mgbe a kụsịrị ya, nkwụsi ike ngwaahịa siri ike, ngwangwa ngwa ngwa mgbe e kwechara, wee laghachi n'ụdị mbụ n'oge na-adịghị anya ịsachara, PA6 filaments kpọrọ nkụ, dị nro, dị nwayọọ ma dịkwa mma, ọ gaghị emerụkwa aka gị aka kwa ụbọchị
A na-eji filaments PA66 eme ihe n'ọtụtụ ebe na brọsh efere, brushes ite, brushes kalama, brushes na-asacha ihu, ihe nhicha nhicha nhicha, brushes brushes, steam brushes, brushes brushes, ntutu ntutu, akwukwo nri na mkpụrụ osisi na-ehicha ahịhịa. mbọcha mbọ, wdg.
Hot Sale naịlọn filament PA 66 filament Hair ahịhịa Bristle
PA66 ahịhịa filament bụ ike kachasị elu na ọtụtụ ụdị eji n'ọtụtụ PA. N'ihi nnukwu crystallinity ya, nkwụsi ike ya na nguzogide okpomọkụ dị elu.
Naịlọn pa 610 filament ezé ezé
Pa610 filament bụ otu n'ime ihe ndị dị elu filament ihe n'ihi oke mma nguzogide ya, nkwụsi ike ike, nkwụsi ike, nguzogide ngabiga, na nguzogide ịka nká.
Hot ire pa610 filament ngwaahịa
Pa610 ahịhịa filament nwere uru nke ala ikwu njupụta, ala mmiri absorption, ike alkali eguzogide, na-adịghị ike acid iguzogide, ike na-eyi ndị na-eguzogide na ike ọgwụgwụ na-eguzogide, wdg, adabara iche iche ulo oru brushes
Antibacterial PBT filaments maka Toothbrushes
Mgbatị nke PBTfilament dị mma karịa nke waya nịịl waya, mana nkwụsị abrasion ya adịghị mma dị ka 610. Arụ ọrụ nke PBT dị nro, ọ kachasị adaba maka ihicha na nsị nke akụkụ ndị dị mma, dịka nhicha ụgbọ ala.
PBT na PET Filament maka imepụta ezé
pet na pbt filament Ntutu isi dị nro ma sie ike, mgbatị dị elu dị elu, mgbatị siri ike na-agbake, na-agbanwe ma na-eguzogide ọgwụ, ọ naghị adị mfe ịgbagha na nrụrụ, na ogologo ndụ ọrụ
Plastic PET filament maka ezinụlọ ahịhịa
Na mgbakwunye na njirimara nke PBT, PET nwere njirimara ndị a: ike na ike; ike ọgwụgwụ na-eguzogide, esemokwu na-eguzogide, chemical-eguzogide, na okpomọkụ na-eguzogide
Industrial ahịhịa filament maka ime nhicha ahịhịa
Industrial ahịhịa filaments nwere ike, elu na-eyi ndị na-eguzogide na elu ekweghị ekwe, nke na-enye ahịhịa filaments na pụrụ iche kwụsie ike, eyi eguzogide, corrosion eguzogide, deformation na ịka nká, na ọrụ ndụ nke ahịhịa filament karịrị echiche gị.
High Quality Industrial ahịhịa filament
Brushlọ ọrụ ntanetị, waya mmepụta ihe, mgbanwe dị mma, nguzogide okpomọkụ dị elu, nkwụsi ike siri ike, ike mgbake ike, waya waya mmepụta ihe, waya mmepụta ihe, na-eyi na-eguzogide ma na-adịgide adịgide, ndụ ogologo oge, nrụgide kemịkal dị elu, ịdị elu siri ike, ngwa ngwa dị iche iche.
Xinjia naịlọn CO., LTD.